Ihe Ị Chọrọ Ịmara Banyere IP Subnetting Na 8 Easy Steps
Ihe niile ịchọrọ ịmara banyere nchịkọta IP na 8 mfe nzọụkwụ
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla (coder, onye nchịkwa nchekwa data ma ọ bụ CTO) chọrọ ịghọta IP subnetting dị ka ihe dị mkpa maka ịrụ ọrụ ya nke ọma. Ọ bụ ezie na, echiche ndị ahụ dị mfe ma ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-eche ihe isi ike n'ozuzu ịghọta nke a isiokwu.
Okwu a ga-agbaji n'ime nzọụkwụ asatọ dị mfe iji nyere gị aka ịghọta IP subnetting.
Ị ga-enwe ike ịghọta na-eso ihe mgbe ị gafere usoro nzọụkwụ 8 a:
- Etubiwo adreesị IP.
- esi edozi onye rawụta.
- otu esi edozi ọrụ.
- esi eme atụmatụ otu obere ụlọ ọrụ ma ọ bụ netwọk ụlọ.
A chọrọ nghọta dị mkpa banyere ọnụọgụ abụọ na ọnụọgụ abụọ. Tụkwasị na nke a, gaa site na ịkọwa nkọwa na usoro iji malite:
- Adreesị IP: Ọ bụ adreesị numericị pụrụ iche nke a na-ekenye na kọmpụta ọ bụla, onye ntanetị, onye nbipute, mgbanwe, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na kọmputa nke ga-abụ akụkụ nke netwọk TCP / IP
- Subnet: Ọ bụ akụkụ dị iche na nke a na-ahụ anya nke netwọk ọrụ. A na-ekenye ya na ala, ụlọ ma ọ bụ otu ebe ọnọdụ ebe.
- Ogwe ihe ntanetị: Ọ bụ nọmba 32-bit iji kpoo netwọk nke adreesị IP. E kewara adreesị IP n'ime adreesị ntanetị na adreesị nnabata.
- Network Interface Card (NIC): Ọ bụ ngwaike ngwanrọ kọmputa site na nke kọmputa jikọọ na netwọk.
Nzọụkwụ 1 - Ihe Mere Anyị Ji Dị Mkpa Mkpa
Iji ghọta ihe mere anyị ji dị mkpa (obere maka subnetwork), anyị ga-amalite site na mmalite wee chọpụta na anyị chọrọ ịkọrọ "akụkụ dị iche iche" na netwọk. Ndị ọrụ kwesịrị ikwurịta okwu na ndị na-ebi akwụkwọ, ihe omume email ga-ekwusara na sava, yana maka nkwurịta okwu nke ọ bụla "components" a chọrọ ụfọdụ adreesị pụrụ iche. Nke a dị ka adreesị ụlọ. Enwere otu obere obere na adreesị ahụ ga-adị n'ụdị nke ụtụtụ. Enweghị ngwaọrụ nwere mkpụrụ edemede mkpụrụ okwu na adreesị ya dịka "33rd Street" nwere ike jikọọ na netwọk. Enwere ike inye ya aha aha alphanumeric - anyi nwere ike ịkọwa aha ahụ na adreesị ọnụ - ma adreesị naanị ga-agụnye ihe odide ọnụ ọgụgụ.
A na-akpọ nọmba ndị a dị ka adreesị IP, ha nwekwara ọrụ dị mkpa nke ịpụta ọ bụghị naanị adreesị nke "components," ma otu ha ga esi ekwurịta okwu. Inwe adreesị IP abụghị naanị ihe achọrọ. Ọ dị mkpa ịkọwa ụzọ ị ga-esi zipu ozi site n'otu adreesị gaa na nke ọzọ.
A na-achọkarị ịtọ ihe na netwọk ọnụ maka nhazi na ikike. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ na ụlọ ahịa gị na ụlọ ọrụ gị na iche iche na ngalaba mmepụta. Ị ga-achọ ịmachi ndị na-ebipụta akwụkwọ nke onye ọ bụla na-ahụ maka ngalaba ọ bụla hụrụ. Enwere ike ime nke a site n'inwe adreesị nke ndị na-ebi akwụkwọ ahụ dị iche iche dị iche iche.
Enwere ike ịkọwa netwọtị dịka otu ihe ezi uche dị na ngwaọrụ dị iche iche ejikọrọ na netwọk.
Ngwaọrụ ọ bụla na subnet nwere adreesị nke na-ejikọta ya na ngwaọrụ ndị ọzọ na otu subnet. Nke a na-egbochi ngwaọrụ na otu subnet ka ị ghara inwe mgbagwoju anya na ụsụụ ndị agha na subnet ọzọ.
N'ihe banyere ihe odide na adreesị IP, a na-akpọ ngwaọrụ ndị a "ụsụụ ndị agha". Ya mere, na ihe nlereanya anyị, e nwere netwọk (nzukọ), nke e kewara n'ime ihe ndị ezi uche dị na ya (ụlọ ahịa na mmepụta ngalaba), nke ọ bụla nwere nke ya (ndị na-ebi akwụkwọ na ndị ọrụ).
Nzọụkwụ 2 - Ịghọta ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ
A pụrụ iji nọmba ọnụọgụ abụọ mee ihe dị ka ihe ọzọ na nọmba ọnụọgụ. Echiche a nwere ike ịmụta dị mfe dika otu na otu. Ma ọtụtụ ndị nwere ọdịdị dị iche iche nke arithmophobia (egwu ụjọ na-atụ egwu nke ọgụgụ na nọmba) na-enwe ụfụ nke egwu site na mgbe ị na-ekwu banyere "nọmba ọnụọgụ abụọ". Mee ka egwu gị kwụsị izu ike.
Anyị na-eji usoro nọmba ọnụ ọgụgụ anyị na-eme kwa ụbọchị, ebe ọnụ ọgụgụ anyị dabeere na 10s nke ihe - ikekwe n'ihi na anyị nwere 10 mkpịsị aka na mkpịsị aka 10. Usoro nhazi dum nwere akara dị iche iche na-anọchite anya ụdị dị iche iche. A na-akpọ usoro akara ngosi dịka "1" na gburugburu gburugburu "0".
Nke ahụ anaghị agbanwe agbanwe na usoro ọnụọgụ abụọ.
Site n'usoro usoro, anyị nwere ike ịnọchite anya ọnụ ọgụgụ buru ibu ma dị ukwuu site na ijikọ ọnụ ọgụgụ ọnụ. Ọ nwere nọmba nọmba dị iche iche:
- Nọmba nchịkọta ọnụ, dika 9
- Nọmba ọnụọ abụọ, dị ka 11,
- Nọmba ọnụọgụ atọ, dị ka 205, na na.
A na-egosipụta ọnụọgụgụ ka ukwuu karịa nke ọ bụla dị ka ọnụ ọgụgụ ga-abawanye. Enwere ọnọdụ 1, ọnọdụ 10, ebe 100 nọ n'ọnọdụ 1000 na ihe ndị ọzọ.
Site na ọnụ ọgụgụ a, 1 nọ na ebe 5, 10 site na 0 na 100 site na 1. Site ugbu a gaa n'ihu,
Usoro ọnụọgụ abụọ na-adabere na otu echiche ma ọ bụghị n'ihi na enwere naanị nọmba abụọ na usoro ọnụọgụ abụọ, 0 na 1, a chọrọ ọtụtụ nchịkọta iji gosipụta ọnụ ọgụgụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, 01101001 bụ ọnụọgụ abụọ nke 105 (n'eziokwu, a na-edekarị ya dịka 1101001 n'ihi na anyị na-adabere na-eduga zeros dịka usoro nhazi ọnụ ọgụgụ. ebe).
Ọzọkwa, dịka ọnụọgụ ọnụọgụgụ na-abawanye, ọnụọgụ nke ọ bụla na-egosipụta ọganihu dị ukwuu karị. Usoro ọnụọgụ abụọ nwere ebe 1, ebe 2, ebe 4, ọnọdụ 8, ebe 16, ebe 32, ebe 64 na ihe ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 3 - Adreesị IP
"IP" na adreesị IP na-anọchite anya Protocol Ịntanetị. A na-ekwukarị protocol dịka "iwu nke nkwurịta okwu". Were ya, ị na-eji redio abụọ ụzọ na bọtịnụ uwe ojii. Ị nwere ike iji "n'elu" iji gosipụta njedebe nke akụkụ ụfọdụ nke mkparịta ụka ahụ na "na-apụ ma ọpụpụ" mgbe ị gụchara mkparịta ụka ahụ dum. Enwere ike ịkọwa ha dị ka iwu nke ikwu okwu na redio abụọ. Iwu ndị a bụ usoro nke nkwurịta okwu redio abụọ.
Ya mere, nyocha IP bụ akụkụ nke iwu maka mkparịta ụka n'elu Intaneti. Mana ọ ghọọwo ewu ewu na eji ya na ihe ọ bụla netwọk ejikọrọ na Ịntanetị. Ọ pụtara na ịza ajụjụ IP metụtara ọtụtụ netwọk yana Internet.
Ya mere, gịnị bụ adreesị IP? Kedu kpọmkwem, ọ bụ ụzọ nke a ga-esi kpọbaa akụrụngwa na netwọk. A na-emepụta nanị nọmba, nke a haziri nke ọma na ụdị nke XXX.XXX.XXX.XXX. A na-ezo aka ya dịka usoro nhazi nha.
Ngalaba ọ bụla dị n'agbata ntụpọ nwere ike ịdị n'etiti 0 na 255, ya mere, adreesị IP gụnyere:
Anyị nwere ike ide nọmba ọnụọgụ abụọ ndị a n'ụdị ọnụọgụ abụọ site na iji nke ọ bụla n'ime ọnụ ọgụgụ dị iche iche dị iche iche na-agbanwe site na ntụpọ na ịtụgharị na nọmba ọnụọgụ abụọ. Ya mere, a pụrụ ide nọmba dị ka 206.112.45.61 dị ka:
A na-akpọ nke ọ bụla n'ime ọnụọgụ abụọ ndị a octet, ma a naghị eji okwu a mee ihe karịa ka ọ dị. A na - achọta ya na akwụkwọ na klas, ya mere mara ihe ọ bụ (ma chefuo ya).
Kedu ihe mere ọbụla nke ọ bụla ji enwe ntụpọ nke njedebe nke sitere na 0 ruo 255? Ogologo adreesị IP na-ejedebe na bit 32 ma kachasị ọnụ ọgụgụ 256 nke nọmba ọnụọgụ abụọ ga-ekwe omume na octet (mgbakọ na mwepụ dị ka 28). N'ihi ya, 255.255.255.255 bụ adreesị IP kachasị elu nwere ike inye, nyere na otu octet nwere ike si na 0 gaa na 255.
Enwere otu akụkụ dị mkpa nke adreesị IP nke dị mkpa ịghọta - echiche nke otu klas.
Adreesị IP ọ bụla bụ otu klas dị iche iche nke adreesị IP. Ọ dabere na ọnụọgụgụ na octet mbụ. Ihe ọmụmụ ndị a bụ:
Ị hụla na nọmba 127 na-efu? Nke ahụ bụ n'ihi na eji ya dịka adreesị loopback. Chee nke a dịka adreesị nke na-ekwu, "Nke a bụ adreesị m." Naanị klas atọ mbụ - A, B na C - na-ejikarị ndị nchịkwa netwọk na klas abụọ ndị ọzọ, D na E, debe.
A na-akọwa klas nke adreesị IP site na-elele octet ya mbụ, ma maka otu ọ bụla, usoro nke adreesị IP dị iche. Adreesị IP ọ bụla nwere akara adreesị na adreesị nnabata. Maka netwọk ọ bụla, akụkụ netwọk nke adreesị bụ adreesị nkịtị, ebe adreesị ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe pụrụ iche maka mpaghara nke ọ bụla na netwọk ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na nọmba ekwentị gị bụ 911-615-1534, koodu mpaghara (911) ga-abụkarị, ma ọ bụ netwọk, akụkụ nke ekwentị, mgbe nọmba ekwentị gị (615-1534) ga-abụ adreesị nnabata gị.
Ndị na-esonụ bụ netwọk maara ihe nke ndị klas na ndị nabatara components nke adreesị IP.
4 - Subnetting na Nchekwa Subnet
Ị mepụtara nkewa ezi uche nke netwọk nke netwọk. Ya mere, Subnetting gụnyere ịkekọrịta netwọk n'ime obere akụkụ a na-akpọ subnets. A na-eji ntinye ego site na nbudata ibe n'ibe nke adreesị IP. N'okwu ndị ọzọ, adreesị IP ahụ nwere mpaghara atọ - akụkụ netwọk, mpaghara subnet na, n'ikpeazụ, akụkụ nke ndị ọbịa.
A na-emepụta netwọk n'ụzọ ziri ezi site na ijide ikpeazụ nke si na netwọk nke adreesị. A na-eji ya iji chọpụta ọnụọgụ ederede achọrọ. Otu adreesị C C na-enwe bitsị 24 maka adreesị nke netwọk na asatọ maka onye ọbịa ahụ, mana anyị na-agbazinye ọnụ ọgụgụ kachasị nke adreesị nnabata ma kwupụta ya dịka ịtọ ọkwa ntanetị.
Anyị nwere ike ịnwe ihe abụọ nwere ike ịnweta site n'ịgba otu obere. Dị ka ọnụ ọgụgụ ọnụọgụgụ gụnyere naanị nọmba abụọ, ọ bụrụ na bit bụ 0, mgbe ahụ, nke ahụ ga-abụ otu subnet; ọ bụrụ na bit bụ 1, nke ahụ ga-abụ nchịkọta nke abụọ. N'ezie, site n'otu aka ahụ, nke ahụ na-ebelata ọnụọgụ ndị agha anyị nwere ike ịnweta na netwọk ahụ na 127 (mana n'ezie aha 125 na-eji eme ihe maka ihe niile zeros na ihe niile abụghị ndụmọdụ), site na 255.
Ya mere naanị na nchịkwa subnet ị nwere ike ịgwa mmadụ ole bits ga-agbaziri, ma ọ bụ, na okwu ndị ọzọ, ọnụ ọgụgụ ole ka anyị chọrọ iji nweta netwọk anyị?
Nchọpụta subnet na-emetụ egwu karịa eziokwu. Ihe niile nkpuchi ntanetị bụ igosi ọnụọgụ nọmba "gbaziri" site na ihe omume nke adreesị IP. Echiche a bụ ntọala niile ntinye. Cheta echiche a Ọ bụrụ na ị maghị ihe ọ bụla gbasara ntinye.
Dịka aha ya si kwuo, ọ na-ekpuchi bits nke ndị a gbaziri site na adreesị adreesị nke adreesị IP.
Dịka ọmụmaatụ, enwere mkpuchi ntinye maka adreesị C C. Ndepụta ntanetị bụ 255.255.255.192 nke na-egosi ọnyà nke onye ọbịa nke adreesị eji eji chọpụta nọmba ntinye, mgbe a sụgharịrị ya na bits.
O doro anya na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ a na-akwụ ụgwọ pụtara obere ndị agha na netwọk. Mgbe ụfọdụ, ịmekọrịta na ndokwa niile nwere ike ịgba aghara, ya mere na ụfọdụ tebụl nke nhọrọ ntinye.
Kọmitii C Chip / Subnet
Klas C Na-ehichapụ Njirimara Subnet Nkịtị Ndị Dị Iche Iche Ihe Ntanetị nke Ogwe Ihe Njiri Subnet
Rịba ama na nchikota nke adreesị IP na subnet masks na eserese ka edere dịka ihe abụọ dị iche iche, dịka Network Address = 200.122.67.80, Mask = 255.255.255.192.
Nzọụkwụ 5 - Ọha Nha. Adreesị IP onwe
N'ikwu ya, a ga-enwe ihe gbasara 4,228,250,625IP adreesị maka ojiji, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ijikọta adreesị IP. Anyị ga-agụnye adreesị IP niile na adreesị IP onwe gị. Site na nkọwa, ọ ga - apụta, naanị adreesị IP ga - enwe.
Otú ọ dị, adreesị IP niile adịghị. Ụfọdụ n'ime ha nwere ọrụ pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, adreesị IP ọ bụla na 255 na njedebe ejiri dị ka adreesị mgbasa ozi pụrụ iche.
Ndị na-esonụ bụ adreesị ndị ọzọ eji maka akara ngosi pụrụ iche, gụnyere:
- Mgbasa ozi ebighi ebi na onye ọ bụla na-akwado ya na mpaghara nchịkọta mpaghara
- (127.0.0.1) bụ adreesị loopback. A na-eji ya mgbe onye na-akpọ ya na-ezo aka n'onwe ya
- Usoro nhazi usoro
- A na-ebute mgbasa ozi na mbụ na subnet, wee nye ndị agha niile na subnet
Echiche nke adreesị nkeonwe dịka nke ntinye onwe ya na usoro ekwentị. Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịkpọ ozu na otu nzukọ, ọ ga-akpọ nọmba nọmba ekwentị, nke ga-esi na ya mezuo ndị ọrụ niile. Ozugbo ejiri njikọ ahụ, ọ ga-abanye nọmba ntinye nke onye ahụ ọ chọrọ ikwu. Adreesị IP onwe gị na-ejikọta na adreesị IP dịka ndọtị ndọtị na-ejikọta na sistemụ ekwentị.
Ndị nchịkwa netwọk nwere ike ịgbasa ogo netwọk ha site na iji adreesị IP onwe ha. Enwere ike ịnwe netwọk na otu adreesị IP ọha na eze na-ahụ niile okporo ụzọ na Ịntanetị, na narị otu narị - ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ puku ndị agha nwere adreesị IP onwe ha na subnet.
Adreesị IP ọ bụla nwere ike iji onye ọ bụla na-aghọta na okporo ụzọ niile na-eji adreesị ndị a aghaghị ịnọgide na mpaghara. Ọ gaghị ekwe omume, dịka ọmụmaatụ, ọ gaghị enwe ike ịnweta ozi email metụtara adreesị IP onwe ya iji gafere Internet, ma ọ bụ ihe bara uru iji nwee otu adreesị IP onwe ya nke ọma na netwọk nke ụlọ ọrụ ahụ.
Site na tebụl na-esonụ, ị nwere ike ịnye adreesị IP onwe gị maka netwọk nkeonwe.
Site na klas nke ọtụtụ okwu
10.0.0.1 10.255.255.255 A Otu adreesị netwọk Otu A
172.16.0.1 172.31.255.254 B 16 jikọtara adreesị netwọk B B
192.168.0.1 192.168.255.254 C Ruo 216 Class C adreesị netwọk
Nzọụkwụ 6 - CIDR IP Addressing
Mgbe i jiri oge dị ukwuu na-amụ banyere adreesị IP na klaasị, ị nwere ike ijuanya na n'eziokwu, ndị a ejighị ya ọzọ. Nzube ya bụ ihe ọzọ ma ọ bụghị karịa ịghọta ihe ndị bụ isi nke adreesị IP.
Kama nke ahụ, Amaghị Ntanetị Internet (CIDR), a kpọrọ "cider" site na ndị nchịkwa netwọk iji gosipụta adreesị IP. Ebumnuche n'azụ CIDR bụ ime ka echiche nke subnetting na Internet zuru ezu. Adreesị na-enweghị ntụpọ, Na nkenke, pụtara na kama ịkekọrịta otu netwọk dị iche iche, a na-ejikọta netwọk iji nweta nnukwu ntanetị.
Ya mere, a na-ekwukarị CIDR ka ọ dị elu, ebe a na-emeso netwọk dị ukwuu n'okpuru iwu nke ntinye. Ihe nkpuchi a na-adakwunye adreesị netwọk dị n'ụdị ibe n'iji dee CIDR na netwọk / usoro ihe nkpuchi. Dịka ọmụmaatụ, edere ya dị ka 105.245.67.19 / 34. Ojiji nke prefix netwọk (/ 34 nke 105.245.67.19 / 34) bụ ihe kachasị mkpa ịghọta banyere usoro CIDR nke ntinye aha, kama ikpebi isi ihe dị n'etiti nọmba netwọk na nọmba nnabata site na iji mbido atọ mbụ nke adreesị IP.
Nzọụkwụ 7 - Ntọala Ogologo Subnet Masking
Mgbe a na-enye ihe karịrị otu maskset subnet na netwọk IP, a na-ekwu na enwee ihe mkpuchi ntanetị ogologo (VLSM). Echiche nke (VLSM) dị nnọọ mfe: ị nwere ike imebi otu ntinye subnet n'ime ihe ndị ọzọ na-egosi VLSM kwesịrị ekwesị.
N'oge gara aga, usoro RIP 1 na-ezigara usoro nkesa na ntinye nyocha IP adịghị echebara ikike nke inwe ọtụtụ masks na netwọk. Riter 1 rawụta enweghị echiche nke VLSM, mgbe ọ na-enweta ihe ngwugwu nke a ga-aha maka subnet nke ejirila mee ihe maka adreesị ozi-e. Ọ nwere naanị adreesị ọ ga-arụ ọrụ. Ọ maghị ihe mbụ e dere na CIDR. Ya mere, ọ dịghị ama ama ole ejiri bits maka adreesị nnabata na ole ole maka adreesị ntanetị.
Nzọụkwụ 8 - IPv6 na Nnapụta
O doro anya na adreesị IP 32-bit nwere adreesị ọnụ ọgụgụ dị ole. Mgbasa njikọ nke njikọta na egosiputa ụkọ nke adreesị IPv4. Ntughari okwu IPv6 bụ ihe ngwọta maka uto n'ọdịnihu. Ọ na-ewepụ mkpa maka CIDR na ihe nkesa netwọk dịka eji ya na IPv4.
A na - amụba adreesị IP site na ntanet 32 gaa na 128 ibe n'ibe okwu IPv6. Ọnụ ọgụgụ adreesị IP ga-abawanye na 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456.
Ọbụna IPv6 nwere akara ederede dị iche na nke IPv4, ọbụlagodi ma ọ nwere anya yiri nha anya. A ga-ahụ adreesị IPv6 na otu n'ime ụzọ ndị a:
Akwụkwọ IPv6 na-ekwu okwu na-amasị
A na-eji ụdị hexadecimal kachasị mma na-ezo aka na nọmba 128-bit na ibe adreesị. A na-ekewa ibe adreesị nke ọ bụla site na colon. Edere ya dị ka X: X: X: X: X: X: X: X, ebe X ọ bụla nwere ihe anọ 16-bit.
Ngwunye IPv6 kwadoro
Na gburugburu ebe iji IPv4 na IPv6 na-ekwu okwu nchịkọta akụkọ na-aba uru. Otu adreesị agwakọta ga-adị ka X: X: X: X: X: X: X: X: D: D: D: D, ebe ụkpụrụ hexadecimal nke isii kachasị elu 16-bit nke IPv6 adreesị site na "X" na IPv4 uru bu "D".
Ntinye akwụkwọ IPv6 na-ekwu okwu
N'ime ụdị mpempe akwụkwọ, a na-eji ụyọkọ mmadụ abụọ na-edozi ụdọ zoro ezo iji gosi na "eriri" ahụ.
Nke a bụ isi ihe anyị mụtara:
- Akụkụ nke ọ bụla na netwọk chọrọ adreesị pụrụ iche iji kpọtụrụ.
- Ọnụọgụ abụọ ọnụọgụgụ adịghị oke mgbagwoju anya. Anyị na-eche ihe isi ike nanị n'ihi na anyị na-eji usoro ọgụgụ isi10 na ndụ anyị kwa ụbọchị.
- Subnet bụ usoro ziri ezi nke ngwaọrụ netwọk ejikọrọ. Ọ bụ usoro ezi uche nke ngwaọrụ.
- Anyị na-edebanye adreesị IP n'ụdị XXX.XXX.XXX.XXX, ebe mbụ octet na-akọwa klas nke adreesị IP ọ bụla.
- Ogwe nke Subnet na-egosi na ọnụ ọgụgụ nke bits bụ "gbaziri" site na ihe omume nke adreesị IP.
- A gaghị eji adreesị IP niile mee ihe. Ụfọdụ nwere nzube pụrụ iche.
- Ọnụ ọgụgụ ekwentị ọha na ntinye onwe ya bụ ihe atụ zuru okè nke Ips ọha na eze.
- Adreesị IP nwere components atọ (akụkụ netwọk, akụkụ subnet na akụkụ onye ọbịa).
- A na-emepụta ntanetịpụ site na CIDR iji mee ka echiche nke subnetting na Intanet niile dị.
- Ị nwere ike imebi otu subnet n'ime ihe ndị ọzọ na-egosi na VLSM kwesịrị ekwesị.
- Ọdịnihu dị na IPv6. Ọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ adreesị IP dịnụ na-abawanye yana wepụ ihe achọrọ maka CIDR na mkpuchi netwọk.
- Akpọrọ mmasị, mejupụtara ma gwakọtara bụ ụzọ atọ iji dee adres IPv6.
Olileanya, isiokwu ahụ na-enye ụfọdụ ihe ọmụma banyere isiokwu nke subnetting. Ọ bụrụ na e nwere ajụjụ ọzọ, biko dee akara.